Midowga Musharaxiinta oo beesha Caalamka u gudbiyay talobixin ku saabsan qabashada doorashada - Home somali news leader
France cancels all Brazil flights over fears of Covid-19 variant
Mali ex-rebels say prominent leader Ould Sidati was shot dead
The Frenchman is fighting to return from the Turkish prison
Johnson & Johnson is delaying the roll-out of the Covid-19 vaccine…
China is trying to speed up its vaccination campaign against Covid-19
Home NEWS Midowga Musharaxiinta oo beesha Caalamka u gudbiyay talobixin ku saabsan qabashada doorashada
Midowga Musharaxiinta oo beesha Caalamka u gudbiyay talobixin ku saabsan qabashada doorashada
Midowga Musharaxiinta Madaxweynaha ayaa u direy qoraal digniin iyo talobixin ah beesha caalamka taasoo ku saabsan sidii loo qaban lahaa doorasho heshiis lagu yahay oo ka dhacda dalka Soomaaliya.
Qoraalkan ayaa lagu xusay in loo baahan yahay guddi doorasho oo dhammaan dhinacyada ay quseyso ay ku qanacsan yihiin iyadoo lagu sheegay qoraalka in goluhu uu diyaariyay xubnaha guddiga farsamo ee laga saarayo guddiga.
Sidoo kale qoraalka ayaa lagu baaqay in ay kulmaan guddoomiyaha golaha sare iyo oday dhaqameedyada ka soo jeeda Somaliland ayna soo xulaan guddiga farsamada ee doorashada xildhibaanada ka soo jeeda Somaliland,laguna qabto doorashada labada gole ee xildhibaanada Somaliland Xalane iyadoo ammaankana ay sugayaan ciidamada AMISOM.
Ugu dambeyntii qoraalka ayaa lagu xusay in maadaama waqtiga qabashada doorashada uu gabaabsi yahay in lagu qabto doorashada xildhibaanada Aqalka Hoose hal goob halkii hore ay u ahayd in lagu qabto labo magaalo oo dowlad goboleed walba loo asteeyay.
Halkan hoose ka aqriso qoraalka ka soo baxay Midowga Musharaxiinta;
Previous articleUganda prepares to vote in general election joke of ‘oppression’
Next articleDivers recover the first black box from crashed Indonesia plane
Senataro ugu baaqay dowlada Maraykanka in dib u eegis lagu sameeyo xiriirka Soomaaliya
Maamulka Puntland oo soo bandhigey ciidamo ka soo goostay Gorgor iyo Haramcad